ကျွန်တော်တို့မှာအမျိုးအစားနှစ်မျိုးရှိတယ် ရေပေါ်ငါးအစာတောင့်စက်စက် ငါးအမျိုးအစားများအတွက်ငါးအစာလေးများပြုလုပ်ရန်, တစ်ခုကခြောက်သွေ့တဲ့နည်းလမ်းပါ,အခြားစိုစွတ်သောနည်းလမ်းဖြစ်သည် ငါးအစာကျွေးစက် extruder စက် သော pelletizing သည့်အခါရေနွေးငွေ့ထိုးရန်ရေနွေးငွေ့ဘွိုင်လာနှင့်အတူအသုံးပြုရန်လိုအပ်သည်. ရေပေါ် ငါးအစာကျွေးခြင်းစက် စပါးကနေလုံးလေးစေရန်အသုံးပြုသည်,ပဲပုပ်,အဆိုပါသီးနှံ,သို့မဟုတ်အခြားပစ္စည်းများ.
မှတ်ချက်:ဒီ aqua ငါးအစာကျွေးအောင်စက်ငါးအစာကျွေးစေနိုင်သည်,ပုစွန်စာကျွေးခြင်း,ငါးအစာကျွေးသည်,ရွှေငါးအစရှိသည့်ငါးမျိုးစုံနှင့်အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်အစားအစာများဖြစ်သည်
wင,ရေပေါ်ငါးအစာစက်ထုတ်လုပ်သူအဖြစ်,ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရေပေါ်ငါးအစာစက်ကိုတောင်အာဖရိကကိုတင်ပို့ခဲ့တယ်, ဖိလစ်ပိုင်, အိန္ဒိယ, မလေးရှား, သြစတြေးလျ, ပါကစ္စတန်, နိုင်ဂျီးရီးယား, ကြက်ဆင်, ချီလီ, မတူကွဲပြား, တန်ဇန်းနီးယား, ဇင်ဘာဘွေ, အမေရိက, ဗင်နီဇွဲလား, ထိုင်းနိုင်ငံ, မြန်မာ, ဗီယက်နမ်, လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်နီးပါးစသည်တို့ကို
ဒီငါးအစာစက်ကိုငါးအစာတောင့်စက်ကိုလည်းခေါ်တယ်, အမျိုးမျိုးသောပစ္စည်းများထုတ်လုပ်ရာတွင်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသည်, ငါးခူ, ပုစွန်, ဂဏန်းစသည်တို့. ဒီငါးအစာတောင့်စက်တစ် ဦး ကို set up ငါးအစာစက်ရုံ feed crusher နှင့်အခြား machines.The နှင့်အတူ။ နောက်ဆုံးအစာကျွေးခြင်းလုံးလေးများထူးခြားသောပုံသဏ္andာန်နှင့်ကောင်းသောအရသာရှိသည်, မြင့်မားသောအာဟာရနှင့်ချောမွေ့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ. ငါးနှင့်ပုစွန်အစာကျွေးခြင်းအတွက်, အတောင့်ကို extruding သည့်အခါရေမျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိရေပေါ်အချိန်ကို extrusion ဒီဂရီညှိခြင်းဖြင့်ချိန်ညှိနိုင်သည်,အသေးစားနှင့်အလတ်စားငါးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည် (ငါးခူ, တီလားပီးယား, ပုစွန်စသည်တို့) ကိုင်ဆောင်သူ。
ဤရေပေါ်ငါးအစာတောင့်စက်မှထုတ်လုပ်သောအတောင့်သည်အနည်းဆုံးရေတွင်မျောပါနိုင်သည် 24 အထူးသဖြင့်ငါးကဲ့သို့ငါးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းအတွက်ဖြစ်သည်,အဆိုပါ shrimptortoise,နှင့်အခြားရေနေ product.The တောင့်အချင်းကွဲပြားနိုင်ပါသည်. ငါးစာတောင့်စက်သည်တိရစ္ဆာန်အမျိုးမျိုးအတွက်အစာအမျိုးမျိုးကိုထုတ်လုပ်နိုင်သည်. ရေပေါ်ငါးအစာတောင့်ကြိတ်သည်ကြက်အစာကိုဖြစ်စေနိုင်သည်, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အစာ,ငါးမွေးမြူရေးအစာနှင့်ငါးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများအပြင်ငါးအစာအမျိုးမျိုးကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသည့်ငါးအစာတောင့်စက်ကိုလည်းအသုံးပြုထားသည်။,အာဟာရဆုံးရှုံးမှုကိုလျှော့ချရန်ဖြစ်သည်, ပရိုတိန်းအချိုးတိုး,ဒါပေမယ့်သင်ကလုံးလေးများနစ်မြုပ်လိုလျှင်, ငါတို့မှာအခြားအမျိုးအစားရှိတယ် ငါးအစာကျွေးစက် နစ်မြုပ်ငါးအစာလေးများအောင်သည်.
feed ရေပေါ်ငါးအစာကျွေးခြင်းမပြုမီ,သင်ကုန်ကြမ်းများကိုအမှုန့်အဖြစ်နှိပ်စက်ရန်လိုအပ်သည် ငါးအစာကျွေး
☆ကုန်ကြမ်းများဖြစ်နိုင်သည်: ပြောင်းဖူး,ဂျုံ,ပဲပုပ်,ဘောဇဉ် ,အရိုးမှုန့်စသည်တို့
☆ကုန်ကြမ်းများသည် 60-80mesh ကုန်ကြမ်းရှိသောအစိုဓာတ်ကိုထည့်သွင်းရန်လိုအပ်သည် : 13-18%
☆မုန်ညင်းကိတ်မုန့်: အများဆုံးရောမွှေပါ 40% ငါးအစာကျွေးခြင်းအတွက်ကိတ်မုန့်၏. ဒါပေမယ့်ပိုပြီးခြောက်သွေ့တဲ့ကိတ်မုန့်ကိုမသုံးပါ 20%. မုန်ညင်းကိတ်မုန့်ပါဝင်သည် 30-32% ပရိုတိန်း. flo ရေပေါ်ငါးအစာထုတ်လုပ်သည့်စက်တွင်အဆီနှုန်းမြင့်မားသည်.
☆ပြောင်းဖူး: ပရိုတိန်းပါရှိသည်, ဘိုဟိုက်ဒရိတ်, အဆီ, ဗီတာမင်အေနှင့်အီး.
☆အရိုးမှုန့်: ငါးအရိုးတည်ဆောက်ခြင်းအတွက်အလွန်လိုအပ်သော. အရိုးဖုန်မှုန့်များတွင်ကယ်လ်ဆီယမ်နှင့်မဂ္ဂနီဆီယမ်အချိုးသည်2: 1.
☆ကျွန်ုပ်တို့သည်အပိုလွယ်ကူသောအပိုပစ္စည်းများပါ ၀ င်သည် အင်္ကျီလက်နှစ်လက်, ဝက်အူတစ်ခု, တ ဦး တည်းဖြတ်တောက်ခြင်းဓါးနှင့် သုံးသေမှို.
1) ကွဲပြားခြားနားသောမှိုနှင့်အတူ, ရေပေါ်ငါးအစာတောင့်ကြိတ်စက်သည်အချင်းအမျိုးမျိုးကွဲပြားနိုင်သည်, 0.9mmto ကနေ 10 မီလီမီတာ. အစားအစာသည်အဆင့်အမျိုးမျိုးရှိသောငါးများနှင့်တွေ့ဆုံနိုင်သည်. အစားအစာသည် ၂၄ နာရီရေမျောနေသည်.
2) ရေပေါ်ငါးအစာတောင့်စက်သည်ရောင်းရန်ပုံစံအမျိုးမျိုးကိုထုတ်လုပ်နိုင်သည်, ခွေး, အစာကျွေးခြင်း၏ကြိုတင်ကုသမှုမှတဆင့်ကြောင် etc.Through, အာဟာရဆုံးရှုံးမှုကိုလျော့နည်းစေပြီးပရိုတင်းဓာတ်အချိုးတိုးစေသည်. တိရိစ္ဆာန်များမှအစာကိုအလွယ်တကူအစာကြေနိုင်လိမ့်မည်.
3) ရေပေါ်ငါးအစာထုတ်လုပ်သည့်စက်သည်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသည်, အနိမ့်ပါဝါစားသုံးမှု
4) ဤသေးငယ်သောငါးအစာထုတ်လုပ်သည့်စက်၏ဝက်အူကြိုးသည် enchase သတ္တုစပ်သံမဏိကိုယ်ထည်ဖွဲ့စည်းပုံကိုအသုံးပြုသည်, ရှည်လျားသောဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းအာမခံပါသည်.
6) ငါးအစာထုတ်လုပ်သည့်စက် dia မှထုတ်လုပ်သည့်နောက်ဆုံးအစာတောင့်များ. 0.9-15mm ဖြစ်ပါတယ်.
7)ကွဲပြားခြားနားသောမှိုနှင့်အတူ, ရေပေါ်မျောနေသောငါးအစာကျွေးနိုင်သောစက်သည်မတူသောငါးအစာကိုထုတ်လုပ်နိုင်သည်, 0.9mm မှ 10 မီလီမီတာ. အဆိုပါအစာသည်ကွဲပြားခြားနားသောအဆင့်ငါးများနှင့်တွေ့ဆုံနိုင်ပြီး ၂၄ နာရီရေမျောနေသည်.
8)ရေပေါ်ငါးအစာထုတ်လုပ်သည့်စက်သည်ငါးအမျိုးမျိုးအတွက်အစာကျွေးနိုင်သည်, ခွေး, အစာကျွေးခြင်း၏ကြိုတင်ကုသမှုမှတဆင့်ကြောင် etc.Through, အာဟာရဆုံးရှုံးမှုကိုလျော့နည်းစေပြီးပရိုတင်းဓာတ်အချိုးတိုးစေသည်. တိရိစ္ဆာန်များမှအစာကိုအလွယ်တကူအစာကြေနိုင်လိမ့်မည်.
10)ရေပေါ်ငါးသေးငယ်သောငါးအစာစက်၏ဝက်အူကြိုးသည် enchase သတ္တုစပ်သံမဏိကိုယ်ထည်ဖွဲ့စည်းပုံကိုအသုံးပြုသည်, ရှည်လျားသောဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းအာမခံပါသည်.
1.ရေပေါ်အစာကျွေးခြင်းသည်ရေတွင်မျောပါနိုင်သည် 24 နာရီ
ဤငါးအစာတောင့်ပြုလုပ်သောစက်မှထုတ်လုပ်သောရေပေါ်ငါးအစာသည်ရေပေါ်မျောပါသွားနိုင်သည် 24 နာရီ, အရာနို့တိုက်ကျွေးရေးအဘို့အဆင်ပြေသည်, ထို့အပြင်အလုပ်သမားကယ်တင်. ရေပေါ်မျောနေသောငါးအစာများသည်ရေပေါ်မျောနေနိုင်သည်, အစာကျွေးပြီးနောက်ငါး၏နို့တိုက်ကျွေးမှုအခြေအနေကိုကောင်းစွာကြည့်ရှုနိုင်သည်, နှင့်နို့တိုက်ကျွေးရေးအရသိရသည်အစာကျွေးခြင်းပမာဏကိုညှိဖို့အဆင်ပြေပါတယ်; တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ, လူများသည်အစာကျွေးခြင်းနှင့်အစာကျွေးခြင်းအခြေအနေအားဖြင့်ငါးများ၏ကြီးထွားမှုနှင့်ကျန်းမာရေးကိုတိကျစွာသိနိုင်သည်, ငါးမွေးမြူသူသည်အမျိုးအစားအလိုက်အစာကျွေးနိုင်မည့်ပမာဏကိုတွက်ချက်နိုင်သည်, အသေးစိတ်, အရေအတွက်, ရေအပူချိန်နှင့်ငါး၏အစာကျွေးခြင်းနှုန်း
မြင့်မားသောအပူချိန်နှင့်ဖိအားမြင့်မားသောငါးများအားအစာကျွေးသည့်တောင့်ကိုပြုလုပ်သောစက်ကြောင့်ဖြစ်သည်, အစာကျွေးခြင်းအတွက်ဓာတ်ရင့်ကျက်သည်, နှင့်အဆီအစာခြေခြင်းနှင့်စုပ်ယူပိုမိုအထောက်အကူဖြစ်ပါတယ်, ဤနည်းဖြင့်အစာအာဟာရအတွက်အာဟာရပြည့် ၀ စေပြီးအစာခြေစုပ်ယူမှုကိုတိုးတက်စေသည်. ဖြည့်စွက်ကာ, puffing ဖြစ်စဉ်အတွက်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ဓာတုအပြောင်းအလဲများကြောင့်ဖြစ်သည်, မာနထောင်လွှားသောအစာကျွေးမှုအမှုန့်အချိုးအစားသည်ယေဘုယျအားဖြင့်ဖြစ်သည် 1%, အရာတိုက်ရိုက်အစာကျွေးခြင်း၏ထိရောက်သောအသုံးပြုမှုကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေတယ်. ဖြည့်စွက်ကာ, extruding ဖြစ်စဉ်အတွက်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ဓာတုပြောင်းလဲမှုကြောင့်ဖြစ်သည်, မာနထောင်လွှားသောအစာသည်ယေဘုယျအားဖြင့်နည်းသည် 1% အမှုန့်၏, အရာတိုက်ရိုက်အစာကျွေးခြင်း၏ထိရောက်သောအသုံးပြုမှုကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေတယ်. ပုံမှန်အခြေအနေများတွင်, ရေပေါ်အစာကျွေးသောမွေးမြူထားသောငါးများကိုကယ်တင်နိုင်သည် 5-10% အမှုန့် / မုန့်ညက်အစာကျွေးခြင်းသို့မဟုတ်အခြားတောင့်အစာကျွေးခြင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ feed ကို၏.
3.Pမုန်းတယ် Fလွိုင်ကော်မြို့ ငါးအစာကျွေး ဂအကာအကွယ်တစ်ခု Wပတ်ဝန်းကျင် ater
မာနထောင်လွှားသောငါးအစာများသည်ရေအရည်အသွေးညစ်ညမ်းမှုကိုလျော့နည်းစေသည်. ဒီငါးလေးများထုတ်လုပ်သည့်စက်မှထုတ်လုပ်သောရေပေါ်ငါးအစာများသည်ရေထဲ၌အချိန်ကြာမြင့်စွာပျော် ၀ င်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ, နှင့်အရည်အသွေးမြင့် floating ငါးအစာကျွေးခြင်းနှင့်ပတ်သက်။ မျောနိုင်ပါတယ် 24 နာရီနှင့်ကနို့တိုက်ကျွေးရေးကိုစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်ထိန်းချုပ်ရန်လွယ်ကူသည်, စသည်တို့. ၎င်းသည်ပတ် ၀ န်းကျင်ကာကွယ်ရေးနှင့်ငါးကြီးထွားမှုအတွက်အလွန်အကျိုးရှိသည်.
3. ကုန်ကြမ်း extruding— ရေပေါ်အစာကျွေးတောင့်အောင်စက်
ကျွန်ုပ်တို့၏ရေပေါ်ငါးအစာတောင့်ပြုလုပ်သောစက်ကိုနှစ်မျိုးခွဲခြားနိုင်သည်: ခြောက်သွေ့သောငါးအစာကျွေးခြင်းပြုပြင်စက်နှင့်စိုစွတ်သောငါးအစာထုတ်လုပ်သည့်စက်. စိုစွတ်သောအမျိုးအစားသည်လေအေးပေးစက်နှင့်အတူဖြစ်ပြီးရေနွေးငွေ့ဘွိုင်လာတပ်ဆင်ရန်လိုအပ်သည်. ခြောက်သွေ့သောငါးအစာထုတ်လုပ်မှုလိုင်းသည်စိုစွတ်သောငါးအစာထုတ်လုပ်သည့်စက်၏စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားပြီးစျေးနှုန်းချိုသာသည်, ထို့ကြောင့်များသောအားဖြင့်စိုစွတ်သောအမျိုးအစားငါးအစာထုတ်စက်သည်ကြီးမားသောအစာတောင့်စက်ရုံအတွက်သင့်တော်ပြီးခြောက်သွေ့သောငါးအစာထုတ်လုပ်သည့်စက်သည်အသေးစားနှင့်အလတ်စားအရွယ်အစားအသုံးပြုသူသို့မဟုတ်စက်ရုံအတွက် ပို၍ သင့်တော်သည်။.
အတောင့်တင်းအအေးပေးသည့်အခါဆီမှုတ်ဆေးတောင့်များ၏အပူချိန်တိုးလာသည်, သူတို့ပျော့ပျောင်းဖြစ်လာသည်, အလွယ်တကူချိုးဖျက်နိုင်သည်. ဤကိစ်စတှငျဆုံးရှုံးမှုကိုရှောင်ရှားရန်, အစာကျွေးလုံးလေးများအအေးရပါမည်, နှင့်အကျိုးဆက်ခိုင်မာနေကြသည်. ငါးအတောင့်အပင်အများစုမှမွေးစားသည့်အအေးအမျိုးအစားမှာငါးကိုအအေးပေးသည့်အအေးခံစက်ဖြစ်သည်။.